Fahavitan-tena ara-tsakafo : azo tanterahana hoy ny tranoben'ny tantsaha mpamokatra
Notanterahana tetsy amin'ny CCI Ivato ny 16 hatramin'ny 18 jona 2022 ny fikaonan-doham-pirenena ho an'ny fizakan-tena ara-tsakafo. Resy lahatra ny fitondram-panjakana fa ny fambolena no fanoitra ho enti-miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy fitaovana ho enti-mampandroso ny firenena, ary afaka hampitombo ny harin-karena hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fanokafana izany...
Fankaherezana ny raim-pianakaviana
Ndao hankaherezina ny raim-pianakaviana amin'ny asa sy ny adidy miandry azy ireo. Ny "ray" dia singa fototra iray ao anatin'ny fianakaviana. Ny teny hoe "raim-pianakaviana" dia kambateny azo tamin'ny : "RAY" lehilahy manana vady aman-janaka, loharano niaviana, loham-pianakaviana ; "FIANAKAVIANA" taranaka avy amin'ny olona iray, olona manana ra iraisana, fiaviana iray. Ny ankohonana dia fiaraha-monin'ny ray, reny ary ny zanaka.
Masindahy Jean Baptiste
24 jona — I Masindahy Jean Baptiste no ilay mpaminanin’ny Avo Indrindra nanambara sy nilaza ny fiavian’i Jesoa hoe Zanak’ondrin’Andriamanitra. Izy ihany koa no nanao batemy an’i Jesoa teo amoron’i Jordany, ny nahatonga azy nantsoina hoe Jean Baptiste moa dia noho izy izay nanao batemy izay, izy no ilay mpialoha lalana ny Mesia.
Pejy 4 amin'ny 328